CHOI-WAN | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်း CHOI-WAN ဖြတ်တိုက်နေတဲ့ ကျွန်းငယ်လေးများ
September 18, 2009 — mmweather
ဒီနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ ၁၁နာရီမှာရိုက်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တု ဓါတ်ပုံအရ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN ရဲ့ အဖျားပိုင်းတိမ်တိုက်တွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှုစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာ အစက်လေးတွေအဖြစ်သာတွေ့မြင်ရတဲ့ Iwo To, Haha Jima နဲ့ Chichi Jima ကျွန်းလေးတွေကတော့ မုန်တိုင်းရဲ့ တိုက်ရိုက်နီးပါးဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်တာကို ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းမီတာ ၁ဝဝဝ (မိုင်အားဖြင့် ၅၄ဝ လောက်) ရှိတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု ဒီကျွန်းလေးတွေရဲ့ ဘေး မိုင်၁၅၆ မိုင် အကွာလောက်က ဖြတ်သွားမှာဆိုတော့ လေတိုက်ခတ်မှုနဲ့ မုန်တိုင်းဒီရေလွှမ်းမိုးမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရဘွယ်ရှိကြောင်း သတိပေးချက်တွေလဲ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ရာလမ်းကြောင်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်မှာကတော့ Iwo To, Haha Jima နဲ့ Chichi Jima လို့ခေါ်တဲ့ Ogasawara မီးတောင်ကျွန်းစုလေးက ကျွန်းလေးတွေဖြစ်ပြီး လူနေထူထပ်မှုမရှိတဲ့အတွက် စောစောစီးစီးဘဲ မုန်တိုင်းဒဏ်က လွတ်ကင်းရာကို ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ကြပြီ လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကျွန်းလေးတွေထဲမှာ Iwo To ကျွန်းလေးကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Battle of Iwo Jima စစ်ပွဲကြောင့် လူသိများပြီး လေယာဉ်ကွင်းတွေနဲ့ အဆောက်အဦတချို့ ရှိပါတယ်။
Posted in Education, Weather News. Tags: CHOI-WAN, typhoon, weather. LeaveaComment »
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#4
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN ဟာ အင်အားလျော့လာပြီး မုန်တိုင်း အဆင့်-၄ CAT-4 သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း Typhoon2000(T2K) မှသတိပေးချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ နောက်လာမဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ မြောက်-အနောက်မြာက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်း ရွေ့လျားပြီးတဲ့နောက် အင်အားထပ်ပြီးလျော့ကျလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါဟာ စနေနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ ည ၇နာရီခွဲ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမှာလို့ ခန့်မှန်းထားပြီး – လာမဲ့တနင်္လာနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်အထိလျော့ကျသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်က Iwo To ကျွန်းရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၁၇၅ မိုင်လောက်မှာ ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတွင်းမှာ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီလျှင် ၁ဝ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြီးတော့ မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ ဒီလှိုင်းအမြင့် ၃၉ ပေအထိရှိကြောင်း JTWC သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ ပင်ရေပြင်ပေါ်မှာသာ ရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မဲ့အခြေအနေလဲမရှိတာကြောင့် TSR သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ လာမဲ့ ၄၈ နာရီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း တိုကျိုပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာမုန်တိုင်းအဖျားခတ်တာရှိမှာဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါပုံမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
လာမည့် ၄၈ နာရီခန့်မှန်းချက်ပြ ပုံ (TSR)
လာမည့် ၅ ရက်အတွက် မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းနှင့် အင်အားပြ ပုံ
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: CHOI-WAN, typhoon, weather. 1 Comment »
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#2
Distance 1: 510 km (275 nm) NNW of Saipan, CNMI
Distance 2: 675 km (365 nm) SSE of Iwo To
Distance 3: 830 km (450 nm) East of P.A.R. ဖိလစ်ပိုင် ပိုင်နက်မိုးလေဝသတိုင်းထွာရေးပိုင်နက်မှ မိုင် ၄၅ဝ
Distance 4: 865 km (468 nm) SE of Chichi Jima
Distance 5: 2,195 km (1,185 nm) ESE of Batanes, PH
General Direction: Iwo To-Chichi Jima Islands များသို့ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
Size (in Diameter): 1,155 km (625 nm) / Very Large မုန်တိုင်းအချင်း ၁၁၅၅ ကီလိုမီတာ(၆၂၅ နော်တီကယ်မိုင် – ၇၂ဝ မိုင်) “အလွန်ကြီးမား“
Max Sea Wave Height (near center): 39 ft (11.8 m) ဗဟိုချက်၌ မုန်တိုင်းဒီရေ ၃၉ ပေ (၁၁.၈ မီတာ)
NWS-Guam TrackMap (for Public): 1 PM PST Wed Sep 16
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 00Z Wed Sep 16
Multi-Agency Forecast TrackMap: 8 AM Wed Sep 16
Super Typhoon CHOI-WAN (15W) သည် အဆင့်-၅ CAT –5ဖြင့် မာရီယားနားကျွန်းစုမှ ထွက်ခွာပြီဖြစ်ပါသည်။
+ Forecast Outlook: CHOI-WAN is expected to begin turning to the NW within the next 12 to 24 hours and may reach its peak wind speed of 270 kph before starting to lose strength. The2to 5-day Long-Range Forecast shows the howler recurving Northward to NNE-ward, passing about 110 km to the west of Iwo To on early Friday morning Sep 18 and about 170 km to the west of Chichi Jima on late Friday afternoon. CHOI-WAN shall continue to weaken as it accelerate further to the NE acrossaslightly cooler Northwestern Pacific Ocean.
+ Effects: CHOI-WAN’s dangerous main core (eye & eyewall) remains over warm open seas…its inner bands no longer affecting Agrihan and Alamagan Islands…Outer bands still hovering across the rest of Northern Marianas – bringing rains and winds not in excess of 60 kph. Typhoon conditions w/ winds of more than 200 kph can be felt along the path of CHOI-WAN. 1-day rainfall accumulations of 50 up to 250 mm can be expected along CHOI-WAN’s rainbands…with isolated accumulations of up to 400 mm near the center of CHOI-WAN or along its Eyewall. Residents in low-lying areas & steep slopes must remain alert & seek evacuation for possible life-threatening flash floods, mudslides & landslides due to the anticipated heavy rains brought about by this system. Precautionary measures must be initiated if necessary. Possible coastal Storm Surge flooding of more than 18 feet above normal tide levels…accompanied by large and dangerous battering waves…is possible along the coastal areas of Northern Marianas. Catastrophic damage is likely on this type of storm surge.
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: CHOI-WAN, typhoon, weather.6Comments »